Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း)
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ကဘာလဲ။
စအိုကွဲခြင်းဆိုသည်မှာ အစာဟောင်းအိမ်၏အောက်ပိုင်းရှိ အပေါ်ယံလွှာတွင် အနည်းငယ်ပြဲသွားသောကြောင့် ဝမ်းသွားလျှင်နာကျင်ပြီး သွေးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ရေတိုဖြစ်လျှင် ကွဲရုံသာဖြစ်ပြီး ရေရှည်တွင်မူ ကွဲနေသောနေရာမှ အသားပိုထွက်လာပြီး အတွင်းလိပ်ခေါင်းနှင့် အပြင်လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်သည်။
စအိုကွဲခြင်းသည် ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးပြသနာမဟုတ်ပါ။ ရေတိုတွင်ဖြစ်သော စအိုကွဲနာများသည် ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်အတွင်း ပျောက်သွားတတ်ကြသည်။
အများစုသော စအိုကွဲနာများသည် အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝသောအစာများစားခြင်း၊ ဆေးရည်ထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကောင်းသွားကြသည်။ သို့သော် ၈ ပတ်မှ ၁၂ပတ်ကြာသည်အထိ အနာမကျက်ပါက ရေရှည်ဖြစ်သော စအိုကွဲနာဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးသောက်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းတို့ပြုလုပ်မှသာ ပြန်မဖြစ်ရန်နှင့် ဘေးပတ်လည်ရှိကြွက်သားများပျက်စီးခြင်းတို့ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
စအိုကွဲခြင်းသညအလွန်အတွေ့ရများပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၁ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် အဖြစ်များသည်။ သို့သော် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းကို ဖြစ်စေသောအကြောင်းများကို သေချာစွာသိလျှင် ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်သည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
အိမ်သာသုံးစက္ကူနှင့် အိမ်သာခွက်ပေါ်တွင် သွေးစက်များ ပေကျံနေခြင်း
စအိုကွဲနာမှထွက်လာသောသွေးများသည် နီရဲနေပြီး ဝမ်းနှင့်ရောမနေခြင်း
နာကျင်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားလျှင် အလွန်နာကျင်ခြင်း
စအိုကွဲကြောင်းအနီးတွင် အသားပိုလုံးများကိုတွေ့ရခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းသောရောဂါများဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ- ခရုန်းရောဂါ)
ကလေးမွေးခြင်းဖြင့် စအိုတဝိုက်ကိုထိခိုက်မိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
၁ နှစ်အာက် ကလေးများ
စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း တို့သည် စအိုကွဲစေနိုင်သည့် အချက်များဖြစ်သည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် သင့်ရောဂါရာဇဝင်ကိုမေးမြန်းပြီး သင့်စအိုကွဲကြောင်းကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အချို့သောလူနာများတွင် စအိုထဲသို့လက်အိတ်ဖြင့်နှိုက်ပြီး စမ်းသပ်ခြင်း၊ စအိုလမ်းကြောင်းကိုကြည့်သော ကိရိယာဖြင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်အနာသည် အလွန်နာကျင်နေပါက ဆရာဝန်က အနာကျက်အောင်ဆေးပေးပြီးမှ စမ်းသပ်ခြင်း၊ တိုတောင်းသောမှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
ထိုသို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ခရုန်းရောဂါကဲ့သို့သော အူရောင်သည့်ရောဂါများကိုတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားပြုလုပ်နိုင်သော စမ်းသပ်မှုများမှာ
ထိုစမ်းသပ်မှုကို အသက်၅၀အောက်နှင့် အူသိမ်၊ အူမကြီးရောဂါရှိနိုင်ချေမရှိသောသူများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထိုစမ်းသပ်မှုကို အသက်၅၀အထက်နှင့် အူမကြီးရောဂါရှိနိုင်ချေမရှိသောသူများ၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းတို့မရှိမှ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Anal Fissure (စအိုကွဲခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရေတိုအားဖြင့် အစားအသောက်စားရာတွင် အမျှင်ဓါတ်များစားခြင်း၊ ရေများများသောက်ခြင်းတို့ပြုလုပ်လျှင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း အနာကျက်စေရုံသာမက ဝမ်းလည်းပျော့စေပါသည်။
သို့သော် စအိုကွဲခြင်းကို တောက်လျှောက်ခံစားနေရပါက အခြားသောကုသမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
Nitrogltcerin (Rectiv) လိမ်းခြင်း
Lidocaine hydrochloride (Xylocaine) စသည့် ထုံဆေးများ လိမ်းခြင်း
Nifedipine (Procardia), Diltiazem(Cardizem) စသည့်သွေးပေါင်ကျဆေးများသောက်ခြင်း
ကြာရှည်စွာခံစားနေရလျှင် ခွဲစိတ်မှုခံယူခြင်း တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စအိုကွဲခြင်းဖြစ်သူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ
အသီးအနှံများ၊ ဟင်းရွက်များ ၊ပဲများ၊ အစေ့အဆန်များကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် သင့်အစာအိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေသဖြင့် အနာကျက်မြန်စေသည်။
ဝမ်းသွားလျှင် ညှစ်မပေါက်ပါနှင့်။ ဝမ်းညှစ်ပေါက်လျှင် စအိုကွဲကြောင်းတွင် ဖိအားပိုဖြစ်စေသောကြောင့် အနာကျက်နှေးခြင်း၊ ထပ်ကွဲခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်ဝမ်းသွားလျှင် မညှစ်ပါနှင့်။ အချိန်ယူပါ။
http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/anal-fissure-topic-overview#2Accessed October 02, 2016.
Anal fissure. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anal-fissure/manage/ptc-20168288Accessed October 02, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 9, 2017